Home Wararka Isimada Puntland oo lawareegay hanaanka maamul ee dorashada Puntland
Isimada dowladda Puntland oo maanta Garoowe shir jaraaid ku qabtay magaalada Garowe aayaa waxa ay sheegeen in gabi ahaanba ay lawareegen hanaanka maamul ee doorashada Puntland 2019.
Isimada ayaa sheegay in ay la kulmeen dowladda Puntland iyo Musharaxiinta ,ayna kala hadleen arimaha doorashada Puntland ku soo wajahan. Isimada ayaa sheegay in ay walaac ka qabaan geedi socodka doorashada Puntaland.
Garaad C/laahi Cali Ciid oo ah Afhayeenka Isimada Puntland ayaa sheegay in Isimada ay isaka soo xuleen guddi gaar ah oo doorashada la socon doona inta laga dooranayo madaxweynaha cusub. MW Gaas wali kama hadlin hadalkii maanta ka soo yeearay salaadinta iyo in uu u hogaansami go’aanadooda.
Previous articlePuntland: Wasiir Karaash oo is casilay sheygayna in uu yahay Musharax
Qaraxyo aad culus oo caawa ka dhacay guriga sarkaal ka tirsan...
Maxkamad Gaartay go’aan ka farxiyay Hooyo Soomaaliyeed (Aqriso)